Soo dejisan iFreeUp 1.0.11.974 – Vessoft
Soo dejisan iFreeUp
iFreeUp – software ah si ay u maareeyaan qalabka ku saleysan nidaamka macruufka ah hawlgalka. Software wuxuu bixiyaa iibsiga ammaan ah ee files warbaahinta, xogta oo ka mid ah codsiyada iyo kulan ka dhexeeya qalab iyo computer. iFreeUp u saamaxaaya in ay kala cadeeyo meel bannaan oo ku lug leh qalabka iyadoo la fogeynayo faylasha haraaga ah ama meel gaar ah, codsiyada khasnado, downloads burburay iyo qashin kale. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan gurmad ah ee files iyo codsiyada, haddii loo baahdo. Sidoo kale iFreeUp taageertaa technology gaarka ah kaas oo hubiya ilaalinta macluumaadka qarsoodiga ah ee user.
Transfer ee IPA iyo warbaahinta files
Ilaalinta macluumaadka qarsoodiga ah
iFreeUp Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... LG PC Suite 5.3.24.2015